Afhayeenka Xarakada Al-Shabaab Oo Jeediyey Kalimad Ku Saabsan Ciidda, Kana Hadlay Arrimo Muhiim Ah [DHAGEYSO] – Shabakadda Amiirnuur
Afhayeenka Xarakada Al-Shabaab Oo Jeediyey Kalimad Ku Saabsan Ciidda, Kana Hadlay Arrimo Muhiim Ah [DHAGEYSO]
June 4, 2019 12:46 pm by admin Views: 327
Mu’asasada Alkataa’ib garabka warbaahineed ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa baahisay kalimad ku saabsan munaasabada ciidda oo uu jeedinayo afhayeenka guud ee Xarakada Sheekh Cali Maxamuud Raage (Sheekh Cali Dheere) kaas oo ka dadka ugu hambalyeeyey munaasabada ciidda kana hadlay arimo muhiim ah.
Kalimaddan oo aheyd maqal iyo muuqaal lana daawan karo muddo ka badan 30 daqiiqo ayuu Sheekh Cali Dheere kaga hadlayey xaalada guud ee uu dalku marayo, dagaalka ay kula jiraan shisheeyaha iyo xulifadiisa iyo dhibaatooyinka ay dadka Soomaaliyeed ka dhaxleen gumeystaha iyo dabadhilifyadiisa.
“Ciiddan waxay imaaneysaa iyadoo dadka Muslimiinta ee ku nool Wilaayaatka Islaamiga ah ay weli ku naaloonayaan amni iyo nabadgalyo ay ku heleen ku dhaqanka Shareecada Islaamka ee uu cadowga illaahey in badan isku dayey in uu burburiyo” ayuu yiri.
isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Raayadii Islaamka ayaa weli ka dul babbaneysa wilaayaatka Islaamiga, Shacaairta Islaamka ayaa ka muuqda, masaajiddii ayaa camiran,Jimcihii iyo jamaacadii ayaa la oogaa,Quraankii ayaa carruur iyo cirooleba lagu tartamayaa, madaaristii iyo macaahidii ayaa furan, waajibkii zakadii ayaa la oogaa, xiriirka iimaaniga ah ayaana qabaailka walaaleyey oo isku haysa”.
Mar uu ka hadlayey xaaladda ay ku sugan yihiin maamullada dabadhilifyada, shaqaalahooda iyo taageerayaashooda ayuu Sheekh Cali Dheere yiri:“Halka ay Muslimiintu farxad iyo raynrayn ku ciidayaan, cadowga Allaahna ee saliibiyiinta iyo Murtadiinta waxay ku suganyihiin xaalad dulli iyo taagdaro ah iyagoo ay usii dheertahay darxumo…. tiih iyo tiiraanyo joogta ahna ay haraysay. Nolosha wanaagsan ee ku dheehan cizziga iyo sharafta, magaca iyo maamuuska waxaa lagu kasbadaa daacada Allaah oo kaliya. Allaah subxanahu Watacaalaa wuxuu noloshaa wanaagsan u ballan qaaday dadka Ahlul Iimaanka ee camalka wanaagsan la yimaada”.
Afhayeenka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, Sheekh Cali Maxamuud Raage ayaa soo hadal qaaday duqeymaha wuxuushnimo ee diyaaradaha Mareykanka ay ka geysteen qeybo ka mid ah wilaayaatka Islaamiga ee dalka kuwaas oo uu tilmaamay in lagu beegsaday dad shacab ah oo aan waxba galabsan.
“Iyagoo ku andacoonaya ladagaallanka Mujaahidiinta ayay diyaaradaha Mareykanka si bareer ah u beegsadaan Muslimiintii aaminiinta ku ahaa wilaayaatka Islaamiga, waxayna ku laayeen rag, dumar iyo caruur intaba. Waxey sh.hoose iyo jubooyinkaba duqeyeen goobo caafimaad halkaasoo ay cisbitaaladii burburiyeen, kuna dileen caruur ay ka mid yihiin dhallaan yar oo jirey wax ka yar hal bil. Waxey burburiyeen macaahidii waxbarasho iyo dugsiyadii quraanka. Dhacdoyinkaas iyo kuwa la midka ah ayaa muslimiinta wilaayaadka ku nool dareensiisay xaddiga uu le’eg yahay cadaawada gaaladu u heyso muslimiinta” ayuu yiri.
Sheekh Cali Dheere ayaa sidoo kale ka hadlay xaalada magaalada Muqdisho, halkaas oo uu sheegay inuu jiro bandow cunaqabateeyey dadka Soomaaliyeed kaas oo keenay inaanay dadku si xuriyad ah ugu dhaq-dhaqaaqi Karin magaalada, soo qabsan Karin adeegyadooda aas-aasasiga ah.
“Cadowga magaalada [Muqdisho] xoogga ku heysta, wuxuu ka dhigay xabsi dusha ka furan Jidadkii ayaa la wada xiray, iyadoo Muslimiinta laga hor istaagay inay raadsadaan nolol maalmeedkooda, caruurtuna waxbarashadooda u dareeraan, iyadoo lagu andacoonayo in amniga la sugayo. Gawaaridii baan dhaqaaqi Karin, ganacsataan shaqeysan karin, meyd baan la aasan Karin, arday baan wax baran Karin, dhakhtar baan la tegi Karin, illaa ay gaareen heer ay haweenku wadooyinka ku umulaan Wallaahu Mustacaan. Iyadoo ay sidaas tahayna hadana hawlgallada Mujaahidiintu marna ma uma hakan jidadkaa la xiray, si dardar ah ayayna Muqdisho iyo nawaaxigeeda uga socdaan howlgaladoodii ay ku baacsanayeen murtadiinta iyo saliibiyiinta. Bishii Ramadan oo kaliya dhowrjeer ayey weeraro ka dhaceen albaabada madaxtooyada iyo koontaroolada laga ilaaliyo” ayuu yiri.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sidoo kale soo hadal qaaday boobka ay saliibiyiintu ku hayaan kheyraadka dadka Soomaaliyeed, isagoo si gaar ah farta ugu fiiqay heshiiskii London ee lagu iibiyey shidaalka Soomaaliya, iyo go’aankii uu baarlamaanka ku ansixiyey qorshahaasi.
Halkan ka degso Kalimadda Sheekh Calii dheere Ama hoos ka daawo